Ankizilahy tia - ny tombony sy ny fiantraikany, nahoana ny vehivavy no tia ny tanora tia?
Mpivady, izay mahatonga ny vehivavy ho matotra kokoa noho ny lehilahy, tsy misy mahagaga fa maro ny olona manana fanontaniana samihafa. Mba hamaliana azy ireo dia nanao asa goavana ny psikology, nijery ny tombontsoa sy ny tombontsoa rehetra avy amin'ny vehivavy sy ilay lehilahy.
Ary ahoana ny amin'ilay tovovavy tanora?
Mba hamaliana ity fanontaniana ity, ny mpampiasa dia tsy maintsy mifandray amin'ny vehivavy marobe izay tsy niresaka firy momba ny taonany. Misy antony maromaro mahatonga ny vehivavy ho tia tanora:
Good sex . Ny mpahay siansa dia nanaporofo fa nahatratra 35 ny isan'ny lehilahy nanao firaisana ara-dalàna, ary ny lehilahy 20-25 taona. Vokatr'izany, vehivavy tsy faly no mitady namana tsara.
Romance . Ankafizin'ny ankamaroan'ny tanora dia tsy mifangaro fanandramana, ary mamorona daty tsy mahazatra ho an'ny vehivavy efa lehibe izy ireo, izay efa tsy azon'ny lehilahy antitra.
Appearance . Eo anivon'ny olona, ​​dia maro no mino fa ny vehivavy dia mitovy amin'ny olon-tiany, izay miasa ho "mpanamboatra fanadiovana".
Ampitomboy ny fitiavan-tena . Ny tovovavy tanora iray dia manampy ny vehivavy hahatakatra fa mbola tsara tarehy izy ary afaka mifaninana amin'ireo tovovavy tanora kokoa.
Power . Vehivavy maro amin'ny vanim-potoana, manana fifandraisana amin'ny zatovolahy iray mba hahatsapa ny maha-reny ny reny . Ny sasany maniry ny hanapaka.
Ahoana ny fomba hahazoana tovovavy tanora?
Ny fifaninanana eo amin'ny firaisana ara-drariny dia tena goavana, noho izany dia zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba ialana amin'ny vahoaka. Ny vehivavy amin'ny vanim-potoana rehetra dia tokony hijery 100%, hikarakara ny tarehiny, ny toetran'ny hoditra, ary mbola hahatakatra ny fironana moderina sy ho tena tia tena. Ho an'ireo zatovolahy dia zava-dehibe ny fifandraisana dia mora sy mahaliana. Ilaina ny mahazo sy ao amin'izany, raha mitady vehivavy janga tanora:
Ny Internet . Maro ireo tranonkala mampiaraka sy tambajotra sosialy izay ahafahanao miresaka amin'ny olona samihafa. Zava-dehibe ny mieritreritra fa maro ireo mpanadala ao amin'ny tambajotra.
Toerana . Afaka mifankazatra amin'ny toerana fialamboly, fampirantiana ary ny sisa.
Fialantsasatra fialantsasatra . Araka ny antontan'isa, matetika ny tovolahy tia ny tovovavy amin'ny vehivavy dia miseho mandritra ny andro sisa. Any amin'ny toerana tsy misy olona mahafantatra anao, mora kokoa ny manao izay tianao rehetra.
Ankafizin'ny tanora - ny soa sy ny ratsy
Na inona na inona toe-javatra, misy ny tombony sy ny tsy fahampian-tsakafo, ao anatin'ilay fanadihadiana izay azon'ny olona azony ny tombom-barony. Eo am-piandohana, fantaro ny atao hoe tovovavy tsara fanahy: fifandraisana am-pitiavana, fahalalahana manokana, ny fahatsapana fa tonga ny tanora faharoa, fifandraisana mahaliana, ny fiheveran-tena ho ambony ary ny fahafahana manomboka fiainana amin'ny pejy vaovao. Ankoatra izany, ny vehivavy mifankatia amin'ny lehilahy iray latsaka noho ny tenany, dia manja kokoa sy mahafinaritra kokoa. Raha ny fahalemena dia anisany ny fanamelohana ny vahoaka sy ny havany, ny fomba fijery samihafa amin'ny fiainana sy ny tsy fahaizan'ny mpiara-miasa.
Ahoana no fomba hitazonana ilay tovolahy tia?
Ho an'ilay bandy dia tsy nanana ny fakam-panahy ho an'ny zazavavy hafa pozazesya, mila mandinika fitsipika vitsivitsy ianao.
Ho an'ny lehilahy amin'ny vanim-potoana rehetra, ny fahalalahana dia manan-danja, ka tokony hilefitra loatra, fialonana ary fanalam-baraka. Fifandirana samihafa dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fifandraisana. Mianara mamaha olana amim-pahatoniana ary mikaroka marary amin'ny toe-javatra samihafa.
Ny firaisana ara-nofo amin'ny tanora tia dia tokony ho tia, samihafa ary mahazatra. Tadidio fa mila manao karazana fialam-boly matetika ianao.
Ny lehilahy dia mpihaza, ary azonao atao ny mialona anao. Zava-dehibe amin'ity toe-javatra ity ny tsy mahavita izany.
Ny vehivavy dia tokony handao lalina ho an'ny tenany manokana mba hahaliana azy, raha tsy izany dia ho lasa manelingelina ny fifandraisana.
Ahoana no tokony hitondran'ny tanora azy?
Manome torohevitra mahomby ny psychologists hanampy ny fifandraisana amin'ny lehilahy.
Ny tovovavy tanora iray manambady dia tokony hankasitraka ilay vehivavy ary matahotra ny ho very azy. Mba hanaovana izany, dia mila mitazona izany amin'ny tariby matevina, ohatra, mandà tsy tapaka.
Ankoatra ny tanora mpiara-miasa dia tsy tokony ho avinavina, satria io no antony mahazatra indrindra hiparitahana amin'ireto.
Ny iray amin'ireo fitsipika manan-danja amin'ny fifandraisana matanjaka dia ny fanajana sy ny fankasitrahana, izay tena manan-danja tokoa amin'ny firaisana ara-nofo matanjaka amin'ny taona rehetra.
Ny fikarakarana ny fomba hisarihana ny tovovavy tanora, tokony voamarika fa ny fifandraisana matanjaka dia zava-dehibe ny ho namana sy fanohanana ilay lehilahy.
Ahoana ny fifandraisana amin'ny tanora tia?
Ny fahasamihafana eo amin'ny taona dia matetika no mahatonga ny olana maro izay miseho amin'ny fifandraisana ary mifandray amin'ny tombontsoa samihafa. Zava-dehibe ny hanorina fifandraisana amin'ny tanora tia amin'ny mitovy lenta, toy ny vitsy dia vonona hankatò ny vehivavy. Ilaina ny mahatakatra ny tombontsoany mba "hiditra amin'ny lohahevitra". Ao anatin'ny fifandraisana, tsy tokony hisy fanalam-baraka na fanindroany bebe kokoa.
Ahoana ny fomba hiverenan'ny tovolahy tia - psychologie
Ao anatin'ny toe-draharaha iray izay nirodana ny fifandraisana ary efa navela ilay olom-boafidy dia tsy tokony hilavo lefona izany, satria misy foana ny fahafahana hamerina ny zava-drehetra indray. Misy toro-hevitra maromaro mikasika ny fomba famerenana ny fifandraisana eo amin'ny mpivady, izay misy vehivavy lehibe sy tanora tia.
Tsy voatery hianjera ny tazo ary hiandry tsara ny fiatoana mba hahafahan'ilay lehilahy manambony ary mahatsapa fa very zavatra manan-danja izy teo amin'ny fiainana.
Aza dia mandany fotoana sy manao ny tenanao ho lasa tsara kokoa ary manomboka manatsara. Ilaina ny miasa fa tsy amin'ny endrika ivelany, fa amin'ny toetra anaty sy ny fahaiza-misaina ihany koa.
Miverena amin'ny tovolahy iray tia azy, aza manadino azy amin'ny antso sy ny hafatra, satria miala fotsiny ity fihetsika ity.
Manaova fehin-kevitra avy amin'ny antony handraisana sy hanitsiana ny toe-javatra ho tombontsoanao.
Ahoana ny fomba hiatrehana ny fisarahana amin'ny tovolahy iray?
Ao anatin'ny toe-javatra iray izay misy fahatsapana ho an'ny lehilahy iray, fa efa vita ny fifandraisana, mila mahafantatra ny fomba hanampiana ny tenanao ianao tsy ho ketraka sy hiverina amin'ny fiainana ara-dalàna.
Mitadiava lesona iray izay haka ny fotoana malalaka rehetra ary hifindra amin'ny eritreritra ratsy.
Tokony hiezaka ny hitady firindrana anaty ianao ary misy fomba maro samihafa, ohatra, ny iray dia manampy ny fitsanganana irery ary ny fisaintsainana hafa.
Ho an'ny vehivavy iray ao anatin'ny taonan'ny tovolahy iray dia afaka manaporofo tsara ny fisintonana sy ny firaisana ara-nofo, ka mendrika ny hisaotra azy sy hanomboka fiainana vaovao.
Ahoana ny fomba ifandraisana amin'ny tovolahy iray?
Matetika amin'ny fifandraisana toy izany, ny vehivavy amin'ny fotoana dia mahatsapa fa efa nihosin-dra izy ireo tamin'ny "rà tanora" ary tonga ny fotoana hamaranana izany. Ny ankamaroan'ny firaisana ara-drariny, raha oharina amin'ny hoe iza no mpivady tsara kokoa sy tanora, dia mifidy ny safidy voalohany ary amin'ity tranga ity dia zava-dehibe ny ampahany araka ny tokony ho izy.
Ny vahaolana tsara indrindra dia ny manazava amim-pahatoniana, hamela ilay olona hahatakatra fa tsy misy fahatsapana hafa ary tsara kokoa ny manaparitaka.
Amin'ny toe-javatra sasany, ny drafitry ny fandosirana dia hanampy, izany hoe, afaka manjavona tsotra fotsiny amin'ny fiainan'ny olona tia anao ianao. Azonao ampiasaina ity script ity raha manana ny fahatokisanao fa tsy hanenjika ilay bandy.
Raha misy olon-tiana iray izay manana fihetseham-po, dia zava-dehibe ny manao ny zavatra rehetra mba tsy hanimba ny psyche. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia ilaina ny manaparitaka ny tombontsoa rehetra sy ny tsy fahampian'ny fifanarahana toy izany.
Fifandraisana tsy misy adidy
Ahoana ny fomba hiverenan'ny vadiny ny sain'ny olona?
Ny tantaran'ny Taombaovao any Rosia
Fanaovana ganika tanana
Agnostika - iza io ary inona no inoany?
Izay mpametaveta no tsara indrindra hisafidy - torohevitra mahasoa tokony ho fantatra alohan'ny hividianana azy
Parachuting - fomba fampiharana parachuting?
Efa nitarina ve ny renivohitra?
Fanambadiana fitiavana - vokany
Soda miaraka amin'ny ginger ho an'ny fatiantoka